नेकपामा झगडाको बीउ, अझै ज्यूँका त्यूँ
आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै स्थायी समिति छलेका ओलीले अब के गर्लान् ?
प्रतिकुल स्वास्थ्य देखाएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेकपाभित्रको प्रतिकुलता पन्छाउन खोजेका छन् । धपेडीले आफू क्लान्त भएको जनाउँदै उनले भोलि बिहीबार बस्ने भनिएको नेकपा स्थायी समिति बैठक एक दिन अगावै स्थगित गरिदिए ।
नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि लाक्षणिक टिप्पणी गरे, ‘सकभर सबैजना बसेर बैठक गर्ने, नत्र विभिन्न कारणले बीचमा हिँड्ने चलन छँदैछ । उहाँले आफ्नो व्यस्तता र शारीरिक कारण देखाएर हिँड्नुभयो ।’
पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलका अनुसार बैठकका लागि तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव अघिल्लो दिनसम्म तयार हुन नसकेकाले ‘छिट्टै बस्नेगरी’ स्थगित भएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको जवाफ अलि फरक छ । उनको भनाईमा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उनै महासचिव पौडेलले स्थायी समिति बैठकका लागि सार्नुपर्ने प्रस्तावको मस्यौदा सचिवालय बैठकमा राख्न नसकेकाले भोलिको बैठक स्थगित भएको हो ।
‘आज उहाँहरूले त्यो प्रस्ताव राख्न सक्नुभएन । प्रस्ताव तयार भएपछि हामी स्थायी समितिको बैठक राख्छौं,’ पोखरेलले नेपालसँग अन्तर्वार्तामा भने, ‘पहिले नीति तथा कार्यक्रम, बजेटलगायत विषयहरू टुंग्याऔं, त्यसपछि पार्टीको मिटिङ त जुनसुकै बेला बस्न सकिहालिन्छ ।’
पोखरेलले सहजै अर्थ्याउन खोजेको नेकपा सचिवालय बैठकको आजको दृश्यावली ठ्याक्कै त्यस्तो भने छैन । सबैलाई थाहा छ, पछिल्ला दुई साता यो सत्ताधारी पार्टीभित्र चलेको सत्ता विवाद कोरोना महासंकट बिर्साउन पर्याप्त थियो । पार्टी विशेषलाई फुटाउन लक्षित गरी प्रधानमन्त्री ओलीले रातारात अघि बढाएको ‘अध्यादेश काण्ड’ मत्थर पार्न उनलाई नेताहरूले ‘एक व्यक्ति एक पद’ मा सहमत गराउनुपर्‍यो । आफूले खटाएका पूर्वआइजिपी तथा दुई सांसदबाट सांसद अपहरण प्रयासको आरोप सार्वजनिक रुपमै खेप्नुपरेपछि ओली दुई दिनमै रक्षात्मक हुन पुगेका थिए ।
ओलीको प्रयासलाई असफल पार्न भन्दै समाजवादी पार्टी र राजपा तुरुन्तै मिलेर जनता समाजवादी पार्टी नामक शक्तिशाली तेस्रो पार्टी निर्माण हुन पुग्यो । एकसाथ भएका यी तीनवटा प्रकरणले ओली तुरुन्तै रक्षात्मक बने । अनि संविधानको भावना प्रतिकुल देखिएका दुई अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए ।
ओलीले सचिवालयसामू आत्मालोचना गरेर अब गल्ती सच्याउने बचन दिए पनि चार दिनपछि उनी पुरानै मुडमा देखिएका छन् । एक व्यक्ति एक पदको अवधारणालाई उनले आफ्ना विरुद्धको षड्यन्त्र भन्दै आज अस्वीकार गरिदिएका छन् । हिजो झम्सिखेलमा ओली इतर पक्षको एक भेलामा भीम रावलले ओलीको राजीनामा माग स्थायी समितिमा ब्युताउनु पर्ने प्रस्ताव राखेको भन्दै ओलीले आफ्ना विरुद्ध निरन्तर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरे ।
एक सचिवालय सदस्यको भनाईमा, आजको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीलाई पद्दतिसंगत बाटोमा नलगी फेरि अपारदर्शी खेल सुरु भएको भन्दै आलोचना गरे । ओलीले नेपाललाई अझै षड्यन्त्रमा लागिरहेको आरोप लगाउँदै चेतावनीको भाषा बोलेपछि बैठकको माहोल भाँडिएको थियो । प्रचण्डले ओलीको प्रतिवाद गरेपछि उनी आफूलाई थकान अनुभूति भएको भन्दै उठेर गए । ओलीको प्रतीक्षा निकैबेर चल्यो । उनी फर्केनन् । बरु प्रचण्ड नै उनलाई भेट्न गए ।
नेताहरूको भनाईबाट बुझ्न सकिन्छ– नेकपाले नाटकीय रुपमा थालेर नाटकीय रुपमै टुंग्याएको भनिएको रडाको खासमा ज्युँका त्युँ छ । प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘दुई अध्यक्षले गृहकार्य गरेर बैठकको कार्यसूची तय गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र बैठक नै अब गर्ने या नगर्ने अथवा अरु के गर्ने भन्नेबारे पनि निर्णय लिनुहोला ।’
आजको सचिवालयमा ओलीको ‘थकान’ यसर्थ अर्थपूर्ण छ । दिन बिराउँदै कविता कोर्न समय छुट्याउने प्रधानमन्त्रीलाई बहुप्रतीक्षित दुई बैठकहरू छल्नुपर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो होला ? के उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भनेझैं, बजेटको चटारो नै यसको कारक होला ?
मैले यो प्रश्न सोधें– ओली निकट मानिने नेकपाका एक वरिष्ठ नेतालाई ।
‘अचेल कोरोनाको लकडाउनले गर्दा काठमाडौंको हावा यति सफा भएछ कि, मोबाइलमा बिस्तारै बोलेको पनि परसम्म सुनिने । नसुन्नुपर्नेले पनि सुनिहाल्ने,’ ती नेताले सांकेतिक भाषामा भने, ‘पख्नुस् म तपाईंलाई ल्यान्डलाइनबाट फोन गर्छु ।’
वास्तविक कुरा यो हो, नेकपा नेताहरू अहिले बालुवाटारबाट फोन ट्यापिङ हुने भयले त्राही त्राही छन् । बालुवाटारभित्र भएका बेला डाइरेक्ट कल उठाउँदैनन् । भाइबर या ह्वाटस् एपका म्यासेजचाहिँ फर्काउँछन् ।
ती नेताले तुरुन्तै ल्यान्डलाइनबाट फोन गर्दै आफ्नो प्रष्टीकरणलाई बिस्तार गरे, ‘भोलि स्थायी समिति बस्दैन भनेर मैले हिजै थाहा पाइसकेको थिएँ । बैठकमा सचिवालयबाट लैजाने प्रस्ताव तयार नभएको भन्ने त केवल निहुँ हो । अहिले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बैठक चाहनुभएको छैन ।’
उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री र सरकारलाई कमजोर बनाउने प्रयास अझै असफल भइसकेको छैन ।’ तर त्यसका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं जिम्मेवार पो हुन् कि भन्ने प्रश्नको जवाफ उनले चित्तबुझ्दो गरी दिएनन् ।
चार दिनअघिको दोस्रो सचिवालय बैठकमा ओलीको राजीनामा नमागेर विषयान्तर गरिए पनि भोलिको स्थायी समितिमा उक्त माग राखिने छनक पाएपछि ओली उक्त बैठक बोलाउन तयार थिएनन् । सरकारका एक मन्त्रीले टेलिफोनमा ठट्टा गरे, ‘उहाँहरूका अध्यक्ष (प्रचण्ड) ले हाम्रो अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) लाई अप्ठेरोमा पार्न खोज्नुभयो नि त । अनि कसरी बैठक बस्छ त ?’
स्थायी समितिमा ओली अल्पमतमा छन् । अहिले ४४ सदस्यीय समितिमा ओलीको पक्षमा १४, माधव नेपालको पक्षमा १३ र प्रचण्डको पक्षमा १७ स्थायी समिति सदस्य छन् । आज सचिवालयले लैजाने भनिएको साझा प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा एजेन्डा नराखिए पनि सचिवालय सदस्यहरूले ओलीबाट पदीय मर्यादा उल्लंघन भएको कारण देखाउँदै राजीनामाको माग चर्काउने छनक ओलीलाई मिलिसकेको थियो ।
पछिल्ला दिनमा ओलीलाई साथ दिने ठानिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि खुमलटार निकटस्थ देखिन थालेका छन् । ओलीले आफ्नो व्यक्तित्व सिध्याउन लागेको भन्दै उनी क्रुद्ध रहेको वामदेव निकटस्थ नेताहरू बताउछन् ।
संविधानको भावना प्रतिकुल हुनेगरी दुई अध्यादेश ल्याएर कोरोना संकटका बेला विवादमा आएका ओलीले आफूबाट कमजोरी भएको भन्दै आत्मालोचना गरेका थिए । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई रातो टेबुलमा सँगै बसालेर असन्तुष्टि सम्हाल्ने कोसिस पनि गरेका थिए । अनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको मागबमोजिम स्थायी समिति डाक्न पनि तयार भएका थिए । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा चुनाव हारे पनि कसैगरी प्रधानमन्त्री बन्न इच्छुक वामदेवलाई ‘उपयुक्त समयमा प्रतिनिधिसभामा लैजाने’ भनिए पनि उनले आफू उपेक्षित बनाइएको तीतो पोखेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने नेकपाभित्र बाझाबाझ फेरि चर्किएको टिप्पणीमा सत्यता नभएको दाबी गरे । ‘मैले भएजति सबैथोक बताइसकें, झन् माधव कमरेडले पनि आफ्नो सन्तुलनकारी व्यक्तित्व झल्कने गरी आज प्रस्तुत हुनुभयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू बैठकबाट हिड्नुभएपछि हामीले नै सल्लाह गरेर अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई अहिले बैठक नराखौं भनेका हौं ।’
सबैले सौहार्द तरिकाले बैठक गरेछन् । अनि किन यत्रो झगडा भएको नि ?
पोखरेलले थपे, ‘ठूला घरको ठूलै चाला । कहिलेकाहिँ तातो-तातो हुन्छ ।’
अनि केही सम्झेजस्तो गरेर अन्तिममा एक वाक्य बोले, ‘तर डढेलो लागिहाल्ने गरी यो तात्तिएको छैन ।’